matambudziko ne test automation uye yazvino qa
Kuru Kushandisa Michina Matambudziko neTest automation uye Yemazuva ano QA
Matambudziko neTest automation uye Yemazuva ano QA
Ndeapi mamwe matambudziko akajairika neyekuedzwa otomatiki muakagwinya uye DevOps?
Yemazuva ano Software Development uye QA inotarisisa zvakanyanya pakuedza otomatiki uye haina kukwana pakuongorora kwekuyedza.
Tiri kuburitsa zvirinani mhando software neakawanda otomatiki bvunzo? Handifungi!
Ini munguva pfupi yapfuura ndakaona positi pasocial media network iyo yakati
Zvandinoona mukuyedza kwakawanda uye zviitiko zveQA nhasi zvakanyanya DevOps, Inoenderera Kubatanidzwa uye Kwayedza Automation.
Kunyangwe izvo zvese zvakanaka kwazvo, ini ndinoona yakawanda yeyakagumbuka bvunzo kesi dzichiitwa otomatiki.
Ndiri kuona mashoma madhiragi akataurwa panguva yekubatanidza bvunzo uye bvunzo bvunzo kunyangwe zvese zviri zvoga.
MuUAT vashandisi vari kutsvaga akawanda uye akawanda matsikidzi nekuti zvikwata zvekuyedza zvinokundikana kuzviona muzvikamu zvakapfuura.
Kana tikasadzidzisa vanhu kunyora zvakanaka zviitiko zvekuyedza tinopedzisira tave nemichina yakakwana…
Uye dudziro yangu ye… ndi 'crap'. :-)
Chero zvodii, ngatione kuti chii ndizvo chaizvo zvichiitika munyika yeazvino QA uye Test Automation.
Matambudziko neazvino QA
Mazhinji e 'Test Automation' mukati mekusimudzira kweagile ari munzvimbo yakaoma. Iyo indasitiri yesoftware iri kudurura muhomwe hombe yemari yekuhaya 'Test Automation Nyanzvi' zvakanyanya kuwana pfungwa yekuvimba kuti software yavari kuvaka ndeyemhando yepamusoro. Asi, zvinoonekwa bugs uye / kana zvimwe nyaya zvinowanikwa panguva yeUAT kana kutsvedza kupinda munzvimbo dzekugadzira. Saka, chii chiri kuitika?
Ongorora:NaTest Automation, ini ndiri kunyanya kureva HWEDU Bvunzo kushandisa michina.
Kuzviongorora kuyedza ikozvino kuri pamoyo wechero yemazuva ano software yekuvandudza maitiro. Chinangwa chayo ndechekuti batsira isa software yepamusoro-soro nenzira inodzokororwa, asi ichokwadi here?
Vanoedza Vachiri Kuedza?
Chokwadi chechinhu ndechekuti muzvikwata zvakawanda zvinonetsekana, miedzo haisi kuyedza zvekare.
Kuongorora kwemanyorero kwakarasikirwa nehunhu, nekuda kwekuvandudza maitiro uye tsika dzakadai seanogwinya uye DevOps , iyo yakagadzira kupatsanurwa munzvimbo yeQA - avo vanogona kodhi uye avo vasingakwanise.
Iwe waigara uchinzwa zvinhu zvakaita sekuti, 'Ndiri 100% otomatiki injinjini', kana '80% otomatiki 20% bhuku', kana zvakatonyanya, 'Ndinovenga kuongororwa kwebhuku'. Kuvhundutsa!
MuDevOps, isu tinotungamirwa kuti titende kuti zvese zvinofanirwa kugadzirwa. Iko hakuna nzvimbo yekupindira kwemaoko, i.e. bhuku rekuyedza.
Mazuva ano, vazhinji vanoedza vari muchikwata cheakagwinya vanonetseka kuenderana ne 'Test Automation' inoda. Iko kune kumanikidza kushandura yega yega nyaya mune iyo sprint, uye hapana nguva yakakwana yekunyatso kuongorora kuongorora.
Dambudziko, kunyanya mukuvandudza kweAgile, nderekuti maQAs anotora nyaya yemushandisi uye otomatiki maitiro ayo ekugashira. Ndichiri kuita kudaro, kwavo kukuru uye kwakangotarisa kurwira nehunyanzvi hwavo hwekukodha mashoma kuti bvunzo ripfuure.
Nomuzvarirwo, izvi zvinogadzira tarisiro yakamanikana kana iwe uchingofarira mukushandisa iyo bvunzo uye uchiona ichipfuura mupombi yekuvaka. Izvi zvinongoratidzira izvo zvaive munzira yekutambira - yakanaka kana yakaipa - iri kushanda uye unowanzo kanganwa nezve iyo hombe mufananidzo.
Kuderera muManongedzo Kuedza
Vazhinji uye vazhinji 'echinyakare miedzo' vari kuchinjira ku 'kunonoka kuyedza' nekutora mamwe makodhi emakosi uye kuve akawedzera hunyanzvi.
Usandibata zvisirizvo; izvi zvese zvakanaka. Ini ndinotenda sevanoyedza, isu tinofanirwa kugara tichiedza kudzidza matekinoroji matsva uye ari kubuda kuti tigare takangwara. Isu tinofanirwa kunzwisisa iyo tech stack kana isu tichida kuyedza system kusvika padanho repamusoro remhando.
Nekudaro, chikonzero chaicho nei vazhinji vanoongorora zvemawoko vachitora matanho aya ndechekuti pane chitendero chakajairika chekuti 'otomatiki kuyedza' kuri pamusoro pekuyedza kwemawoko uye hei, kukodha kunonakidza, handiti?
Ongorora:Nemaoko ekuyedza, ndiri HAPANA kutaura nezvechinyakare nzira yechikoro yekutevera script uye kuita matanho. Ndiri kutaura kune vanonzi 'vanoongorora vanoongorora' - avo vanoita kuyedza chaiko uye vanoda kuziva maitiro ehurongwa nekushandisa zviitiko zvinonakidza uye zvine musoro.
Nehurombo, zvinoita sekunge kuderera kukuru mumusika wevanoongorora vanoedza. Izvi zviri pachena. Ingo mhanya akati wandei emibvunzo yekutsvaga ye 'manual tester' uye 'automation tester' mune chero IT basa saiti, uye woona mhedzisiro yako.
Matambudziko neTest Automation
Zvino, ngatione kuti nei yakawanda yekuyedza kushandisa michina isiri kuendesa chero kukosha.
Zvakajairika zvikanganiso zvandinoona zvichiitika kakawanda:
Kuva nekutarisira zvisirizvo kwema automated bvunzo
Automating bvunzo pane isiri rukoko, panguva isiriyo uye kushandisa zvisirizvo zvishandiso
Automating bvunzo dzisina basa
Kuregeredza nzvimbo dzakakosha
A chinguva kumashure ini ndakanyora blog positi pa nei iwe uchida kushandisa muchina bvunzo ? Kana usati waverenga, zvakakodzera kuverenga.
Pfupiso yechinyorwa ichocho ndechekuti iwe unogadzira bvunzo dzaunoda kumhanya nguva dzose. Nedudziro, aya ndiwo mabvunzo ako ekudzoreredza ayo anosimbisa iyo sisitimu ichiri kushanda.
Nekudaro, kana otomatiki macheki akawana akawanda ekuregedza nyaya, ini ndaizobvunza hunyanzvi hwevanogadzira uye nehurongwa hwekuvandudza. UI Zvoga Miedzo haifanire kuitirwa [inobhadharwa nemari ye] kana [kubhadharwa] ye lousy coding.
Rukoko Rwakaipa, Maturusi Akashata uye Nguva Yakaipa
Ruzhinji rwe 'Test Automation Injiniya' mumapoka eakasimba, tarisa pane yemushandisi nyaya uye otomatiki ndiyo nzira yekutambira. Kazhinji yenguva ino inoitwa nekubatanidzwa kweSelenium neCucumber.
Mazuva ano webhu kunyorera zvave pachena kupatsanurwa pakati peshure nemberi. Iyo yekumashure inonyanya kuumbwa nenhamba ye REST webhu masevhisi kana maAPI ane anowanikwa nyore magumo-mapoinzi.
Pfungwa yekushandisa inogona kuyedzwa pane iyo API dura. Nekudaro, mazhinji ekuyedza automation mainjiniya anoshandira kugadzirisa kushanda paiyo UI rara iri iri zvakanyanya kunetsa.
Kune zvishandiso zvekuyedza kunze uko, senge Karate uye Zorora-Inosimbiswa, izvo zvinorerutsa API kuyedzwa. Isu tinofanirwa kunge tichishandisa zvishandiso izvi panguva yekusimudzira. Zvinosuruvarisa, vamwe mainjiniya emagetsi ekuyedza havatozive iyo hwaro hweHTTP , rega kuve wega anokwanisa kunyora API bvunzo mamiriro.
Kana zviri zveUI bvunzo otomatiki, Cypress chishandiso chikuru. Iyo yakafanana neTDD chishandiso kune vemberi-kumagumo vagadziri. Vagadziri vacho vanowana mhinduro nekukurumidza pamusoro pehunhu hwezvinhu zvitsva zveUI.
Ose maviri Karate neCypress anoshanda se 'budiriro bvunzo maturusi', i.e. zvishandiso zvinotungamira uye zvinotsigira kusimudzira. Ose ari mashoma, ari nyore kusanganisa uye anogona kupa chivimbo mukusimudzira .
Tinogona ipapo kushandisa Selenium kana Cypress kugadzira zvishomanana chete zvezviitiko zvinoshandisa iyo system kupera-kusvika-kumagumo. Aya mamiriro anoumba edu akareruka-uremu regression pack uye nekupa kuvimba mukuenderera kwebhizinesi .
Kazhinji ndinonzwa zvinhu zvakaita sekuti, 'isu tinomirira kusvikira chimiro chanyatso kuvandudzwa uye kugadzikana, tisati tagadzira bvunzo'. Chero chero muyedzo anoziva anoziva kuti nyowani-ficha bugs inodarika regression bugs. Iko kune mukana wepamusoro wekutsvaga nyaya neazvino kuvandudza ficha, pane yakagadzikana ficha.
Kana iwe uchizoshandisa nguva otomatiki bvunzo, zviite zvakafanana ne budiriro kana ivo vachigona kupa yakawanda kukosha.
Otomatiki Miedzo Isina Basa
Usaite otomatiki 'bvunzo' chete nekuda kwayo. Isa imwe nzira yekufunga mumutambo. Dzidza iwo epamusoro-soro uye epasi-chikamu chikamu dhizaini dhizaini. Bvunza izvo zvinogona kukanganisa. Wongorora nzvimbo dzekubatanidza uye tsvaga zvingangotadza mapoinzi.
Tora nzira ine njodzi-based mune otomatiki sezvaungaita (netariro) kuita neyako nzira yekuyedza. Ndeupi mukana wekuti chimwe chinhu chikundikane, uye chii chinokanganisa kutadza? Kana mhinduro iri yakakwira, saka iwo mamiriro anofanirwa kuve otomatiki uye kuurayiwa pane yega kuvaka.
Mune yega yega sprint, isu tinowanzo guma tichinyora otomatiki bvunzo dzakatenderedza nyaya dzevashandisi dzeiyo sprint uye kanganwa nezve kusangana pamwe nezvimwe zvinhu. Iko kune kungave kushomeka kana kusabatika bvunzo.
Rangarira kushandisa 'bvunzo' kunotora nguva. Do also be in mind that by automating a test, hausi kunyatso kuyedza, iwe uri kungo tarisa chete kuti icho chinhu chiri mubvunzo chiri kugutsa imwe nzira yekutambira.
Iwe haikwanise kushandisa michina yekuyedza, asi iwe unogona kuita michina yekutarisa kwezvinozivikanwa chokwadi.
Naizvozvo, pese paunoshandisa automating 'bvunzo', funga nezve iyo nguva yauri kutambisa nekusaedza!
Kuregeredza Nzvimbo Dzinokosha
Ini ndinoona zvakanyanya uye nekuwanda kwekuregeredza kubva pakazvarwa tsika yeDevOps.
MuDevOps, iyo pombi yekuendesa, pamwe chete neanotumirwa zvinyorwa ndiwo musana weiyo software kuvandudza uye kuendesa, asi havatombowana kuyedzwa.
Mumakore mashoma apfuura, ini ndaigona kutaura zviri nyore, kuti ini ndaona zvakawanda 'nyaya dzezvakatipoteredza' kupfuura zvipembenene zvinoshanda. Zvakatipoteredza nyaya dzakadai sematambudziko neCI server, zvinyorwa zvekutumira, nharaunda dzekuyedza, zvichingodaro.
Zvakatipoteredza nyaya zvine hunyanzvi hwekuvandudza uye kuyedza kuyedza. Ivo vanodya yakawanda yekuvandudza uye DevOps nguva uye vanononoka kudzora maitiro ekuendesa, zvakadaro hapana kufunga kwekuyedzwa uye nekudaro kudzivirira idzi nyaya.
Isu tinongovatambira sechikamu chemazuva ano software kuendesa.
Isu tinoshandisa yakawanda yekuedza kugadzirisa hunhu hunoshanda uye nekusaremekedza zvachose 'zvinhu' zvinonyanya kukosha. Zvakatoipisisa kuve nekuvimba neSelenium bvunzo kuratidza kana kutumirwa kuri kushanda kana kwete!
Kusina Kukosha Zviitiko
Zviitiko ndimambo! Mushure mezvose, ndizvo zviitiko zvinoratidza mabugs.
Kazhinji, nyaya yakakomba inodonhedza mukugadzirwa nekuti hapana aifunga nezve iwo chaiwo mamiriro. Huwandu hweyedzo yakaitwa otomatiki haina basa. Kana chiitiko chisina kufungidzirwa kana kuyedzwa, mutemo wesod unotitaurira kuti kune buggi imomo.
Nehurombo, munzvimbo zhinji dzinobudirira mukusimudzira, hakuna kukwana kwakaringana kunopihwa kune uyu wese wakakosha chiitiko che 'Scenario Workshop'.
Ngatione kuti matambudziko ari pamusoro anozviratidza sei mune chaiwo mamiriro ekuvandudza:
Chigadzirwa muridzi anonyora mushandisi nyaya pamwe kana kwete kana mashoma ekugamuchirwa maitiro.
Kwete yakwana nguva yakapihwa kumisangano yekunatsiridza zvikamu zvekukurukura zviitiko zvakasiyana zveiyo nyaya yemushandisi.
Maitiro ekugashira anodudzirwa semabvunzo ekugashira - Hongu, pane musiyano pakati pezviviri !
Vanoedza vanongo gadzirisa maitiro ekugashira mumushandisi nyaya kunyanya vachishandisa Selenium uye / kana Cucumber.
Kuzviongorora kuyedza ingangoita nguva dzose mutoro we 'automation testers'.
Vagadziri havana zano rekuti chii chakafukidzwa mumapakeji ekuyedza kana havatombozive maitirwo ebvunzo.
Iwo ma automated bvunzo anowedzerwa kune inogara ichiwedzera 'regression pack' nekudaro inotora nguva yakareba uye yakareba kumhanya nguva imwe neimwe.
Iyo UI automated inoshanda bvunzo dzakabatanidzwa mune yekuvaka pombi, izvo zvakanaka asi…
Anogadzira anosundira shanduko yakapusa uye anofanirwa kumirira maminetsi makumi matatu kuti otomatiki bvunzo dziende dzakasvibira pamberi pechinhu chitsva kana gadziriso yekugadzirisa isati yaendeswa kugadzirwa. Iwo maminetsi makumi matatu anomirira ndeye chete kana bvunzo dzakapfuura kekutanga. Kana vakakundikana nekuda kweimwe bvunzo kana nharaunda nyaya, zvinogona kutora nguva yakareba.
Sezvo bvunzo dzemuchina dzichimhanya uye iyo QA iri kuongorora kutadza kusarongeka, musimudziri uye / kana muridzi wechigadzirwa vakaratidza kuitwa kutsva uye vanofara kuburitsa, asi havagone nekuti iyo yekuvaka haina girini.
Mushure mechinguva, ingave iyo kuvaka inoenda yakasvibira kana manejimendi anonetsekana nemiedzo inokundikana uye anoita sarudzo yekusunungura zvakadaro. Zvino, BOOM, mushure memaminetsi mashoma mukugadzira, pane spike mune mazana mashanu server server.
Kukundikana kunoita kunge kunoratidza maitiro akafanana
Kukundikana munzvimbo dzekubatanidza.
Kukundikana mukutaurirana neyechitatu bato maapplication.
Webhu masevhisi asiri 'kumusoro' uye zvikumbiro kune API endpoints zvinokundikana.
Kugadziriswa kusiri iko pane imwe yeVM kana node, zvichizoguma nenyaya dzepakati.
Uye zvakadaro, hapana maitiro aripo ekutarisa idzi nyaya sechikamu chebudiriro kana nzira yekuendesa.
Iko kutarisisa kweyedzo automation mainjiniya ndeye kuita iwo mashandiro ebasa. Iko hakuna kutarisisa pane kuita, chengetedzo kana kutsiga. Uye zvirokwazvo hapana kuedzwa kwezvivakwa!
Nguva yasvika yekuchinja tarisiro kubva pakuyedza bvunzo dzekuita idzo dzine mukana mushoma wekubata nyaya dzinoshanda kune dzakakomba uye dzakajairika nyaya dzezvakatipoteredza dzinotambudza kukura.
Bvunzo kushandisa michina, kana zvaitwa zvisirizvo kana pasina kufunga maitiro , kutambisa nguva uye hakupe kukosha kune chero munhu. Crappy otomatiki bvunzo dzinogona kupinza yakakura mari yekugadzirisa uye kutadzisa budiriro. Mukupedzisira, mhinduro chete ndeyekupa bin bvunzo.
Mukuvandudza kwesoftware kwazvino, yakawanda yekuedza kwe 'Test Automation Injiniya' inoshandiswa kurwa neotomisheni kodhi uye kuita kuti 'bvunzo' dzishande pane kungotarisa pakuyedza kwakakodzera uye kuongorora iyo system.
Iko chaiko hakuna kukwana nguva yekunyora otomatiki kodhi uye ita kuongorora kwekuongorora. Isu tinogadzira nyaya mushure menyaya uye tinokanganwa nezveyedzo yekubatanidza, kanganwa nezvemufananidzo mukuru.
Kazhinji tinopedzisa kuita matani ebvunzo, asi kuongorora kwekutsvaga kunowana hwakawanda hwetsikidzi. Zvino tichidzoka shure, tinonyora bvunzo yekuzvidzivirira yezvipembenene zvakawanikwa nekuyedza kuongorora, kubata kudzokorodza bugs.
Tinofanira kuve vanosarudza pane zvekushandisa uye kutonga sarudzo yedu zvichibva panjodzi. Chii chinogona kutadza, ndeupi mukana wekukanganisa uye chii chichava kukanganisa kune mushandisi kana bhizinesi kana zvikatadza?
Kana iwe uri mubhizinesi re 'Test Automation' saka ndokumbira usashandise Selenium kuyedza mashandiro emaAPI kana eUI zvikamu. Panzvimbo iyoyo, shandisa Selenium kugadzirisa chete mashoma anobatsira uye ebhizinesi-akakosha zviitiko zvekupa kuvimba mune bhizinesi kuenderera pamberi pega kusunungurwa.
Uye chekupedzisira, pese paunoshandisa kushandisa 'bvunzo', funga nezve iyo nguva yauri kutambisa nekusaedza!
Zvakajairika ngano dzekuyedza kushandisa
Nei zvakaoma kudaro kuhaya maSETET
Kuedzwa kwanhasi - Shanduko yebasa reQA
ipad 4 vs ipad mhepo 2
yakanakisa mbiri isina waya yekuchaja pad
LG G6 vs Galaxy S7 kumucheto, iPhone 7 Plus, LG V20: kamera kuenzanisa
Samsung Galaxy S21 nhevedzano: matipi uye manomano
Razer Foni mutengo uye zuva rekuburitsa
Kutanga kumboshandura kubva kuAndroid kuenda ku iPhone semutyairi wezuva nezuva, izvi ndizvo zvandaifarira uye zvandisina
Maitiro ekuyera zvinhu neiyo iPhone 6s kana 6s Plus uchishandisa iyo 3D Kubata kuratidza